Gbasara anyị - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Hebei Ọma Art Co., Ltd.
Hebei Ọma Art Co., Ltd.bụ a zuru ụwa ọnụ na-eweta nke kwa ụbọchị luxuries na-ewu ewu handicrafts kemgbe 2007, Anyị na-anya isi nke anyị onwe anyị na-ejere ndị ahịa na nke kacha mma ngwaahịa na zuru ọrụ na-eri ajụjụ, ngwaahịa oru na-akwado, ịbịaru imewe, oru ngo echichi, mba trading, na mbupụ njem na o kwere omume ụzọ . Anyị na-atụ aro usoro ntinye okwu ọzọ nke FOB, CIF, EX. Factory na Door ka Door maka dị iche iche ndị ahịa na-ahọrọ. Ngwaahịa anyị bụ isi nke ntutu anya, Akpụkpọ anụ na ịkpụzi okwute.
Anyị na-etinye onwe anyị mgbe niile iji nye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, dị ka onye ahịa ahịa nku anya na onye nrụpụta n'okpuru akara aha VANNOVA, Anyị nwere ike ịnye ọtụtụ ntutu anya ngwaahịa gụnyere nke Strip lashes, ntutu anya ndọtị, ụyọkọ ụyọkọ ụtarị, nku anya ndọtị. , ntutu anya na nkuanya ngwa wdg. elikpụrụ a pụrụ ịdabere na ya bụ nkwa anyị na-eme mgbe nile maka ndị ahịa niile gafee ụwa. Site na mgbalị na-aga n'ihu ma na-elekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ ya, yana ọkachamara nyocha na nkwado otu nkwado, anyị kwenyere na VANNOVA ga-abụ nhọrọ kachasị mma gị na China.
Anyị na-anabata OEM iji si wholesaler ma ọ bụ nkesa ahịa ndị nwere otutu na fashionable imewe ekwekọghị nke anya lashes na mgbanwe na dị iche iche ahịa n'ụwa nile.
Anyị na-adịghị depụtara anyị niile na ngwaahịa ebe a, n'ihi na ihe imewe na price na nkọwapụta na nkọwa, ma ọ bụ nwere ajụjụ ọ bụla na anyị na ngwaahịa, biko na-eche free kpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ ekwentị, Anyị na-eji ezi obi na-achọ anyị mbụ na klas ngwaahịa na magburu onwe ọrụ na- merie afọ ojuju ndị ahịa na mmata.